Ku soo dhowow WoopShop.com. Intaad wax ka baarayso ama wax ka iibsaneyso WoopShop.com, asturnaantaada iyo macluumaadkaaga shakhsiyeed waa la ilaaliyay oo la ixtiraamayaa. WoopShop.com waxay ku siineysaa adeegyadeeda ugu fiican adiga adoo ku xiran ogeysiisyada, shuruudaha, iyo xaaladaha lagu soo saaray boggan.
1. Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah
• WoopShop.com waxay ixtiraameysaa asturnaanta booqde kasta ama macaamil websaydh ah waxayna u tixgelisaa nabadgelyadaada internetka si dhab ah.
• WoopShop.com waxay ururinaysaa macluumaadka waxaa ka mid ah Emailkaaga, Magacaaga, Magaca Shirkadda, Cinwaanka Wadada, Koodhka Boosta, Magaalada, Dalka, Lambarka Taleefanka, Furaha sirta ah iyo wixii la mid ah, si aan ugu bilowno, waxaan isticmaalnaa buskudyada loo baahan yahay in la soo ururiyo oo la isugu geeyo kuwa aan ahayn macluumaad shaqsiyeed lagu garan karo oo ku saabsan booqdayaasha bartayada. Macluumaadka adiga ayaa kuu gaar ah. Si kastaba ha noqotee, isticmaaleyaashu way soo booqan karaan bartayada si qarsoodi ah. Waxaan ka soo aruurin doonnaa macluumaadka aqoonsiga shaqsiyeed Isticmaalayaasha kaliya haddii ay si iskood ah noogu soo gudbiyaan macluumaadkaas. Isticmaalayaashu had iyo jeer way diidi karaan inay keenaan macluumaadka aqoonsiga shaqsiyeed, marka laga reebo inay ka hor istaagi karto inay galaan hawlo gaar ah oo la xiriira goobta.
• Waxaan ka soo ururin karnaa macluumaadka aqoonsiga shaqsi ahaaneed Isticmaalayaasha siyaabo kala duwan, oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn, marka Isticmaalayaashu soo booqdaan bartayada, iska diiwaangeliyaan goobta, amar ka bixiyaan, ka jawaabaan sahan, buuxiyaan foom, iyo xiriir oo leh hawlo kale, adeegyo, astaamo ama ilaha aan ka diyaarinno boggeena. Isticmaalayaasha waxaa la weydiin karaa, sida ugu habboon, magaca, cinwaanka iimaylka, cinwaanka boosta.
• Waxaan u isticmaalnaa macluumaadka si aan nooga caawino inaan kuu fududeyno si aad u isticmaasho, si aan uga jawaabno codsiyada ama cabashooyinka, si aad nooga caawiso inaan tusno waxa adiga kugu habboon adiga iyo inaan ku xusuusinno macluumaadka cusub, alaabada iibka, rasiidhada, dallacaadaha gaarka ah iyo wixii la mid ah on.
• Inta lagu guda jiro diiwaangelintaada, waxaa lagaa dalbi doonaa inaad na siiso magacaaga, rarka iyo cinwaanka biilasha, lambarka taleefanka, iyo cinwaanka emaylka. Noocyada macluumaadka shakhsiga ah waxaa loo adeegsadaa ujeeddooyin biil, si loo fuliyo amarradaada. Haddii aan dhibaatooyin kala kulanno amarkaaga, waxaan u isticmaali karnaa macluumaadka shakhsiyeed ee aad bixiso si aan kula soo xiriirno.
• Waad ka saamixi kartaa adoo adeegsanaya iskuxirka wargeys kasta oo iimayl ah ama dejinta rukunkaaga shaqsiyeed kadib markaad gasho.
• Waxaan soo aruurin karnaa macluumaadka aqoonsiga aan shakhsiyadeed ee ku saabsan Isticmaalayaasha markasta oo ay la falgalaan Boggeena. Macluumaadka aqoonsiga aan shakhsiyadeed waxaa ka mid noqon kara magaca biraawsarka, nooca kumbuyuutarka iyo macluumaadka farsamada ee ku saabsan hababka Isticmaalayaasha ee ku xirnaanshaha Degelkeenna, sida nidaamka qalliinka iyo bixiyeyaasha adeegga internetka ee la adeegsaday iyo macluumaad kale oo la mid ah.
• Boggeena ayaa isticmaali kara "cookies" si kor loogu qaado khibrada isticmaale, waxaan u isticmaali karnaa sidoo kale cookies-ka saddexaad ee ka socda Trustpilot ama adeeg kale. Isticmaalaha biraawsarka adeegsadaha ayaa ku meeleeya cookies-ka iyaga oo ku dhex jira darawaladooda adag ujeeddooyinka diiwaangelinta iyo mararka qaarkood si loola socdo macluumaadka iyaga ku saabsan. Isticmaalayaashu waxay dooran karaan inay dejiyaan biraawsarkooda si ay u diidaan cookies ama ay kuugu wargaliyaan marka cookies la dirayo. Hadday sidaas yeelaan, la soco in qaybo ka mid ah Boggu aysan si fiican u shaqeyn karin.
• WoopShop waxay ururisaa oo u isticmaashaa Macluumaadka shaqsiyadeed ujeedooyinka soo socda:
(1) Si loo habeeyo khibradaha adeegsadaha
Waxaan u isticmaali karnaa macluumaadka ku wadar ahaan labada lug ay u fahmaan sida Users noo koox ahaan ay isticmaalaan adeegyada iyo ilaha bixisay iyadoo na Site.
(2) Si loo hagaajiyo Goobteenna
Waxaan si joogta ah ugu dadaalnaa sidii aan u hagaajin laheyn website-kayga oo ku saleysan macluumaadka iyo jawaab-celinta aan kaa helno.
(3) Si loo wanaajiyo adeegga macaamiisha
Macluumaadkaaga ayaa naga caawiya inaan si waxtar leh uga jawaabno codsiyada adeegga macaamiisha iyo baahiyaha taageerada.
(4) Si loo socodsiiyo macaamil ganacsi
Waxaan u isticmaali karnaa macluumaadka ku Users siiyaan naftooda ku saabsan marka amar kaliya si ay u bixiyaan adeeg si. Annagu ma macluumaadkan la wadaagi dhinacyada ka baxsan laga reebo inta lagama maarmaanka ah si ay u bixiyaan adeegga.
(5) Si loo maareeyo maadada, dalacsiinta, sahaminta ama astaamaha kale ee Goobta
Si aad u soo diri Users macluumaadka ay isku raaceen si ay u helaan oo ku saabsan mawduucyada aan qabaa noqon doonaa oo xiiso iyaga.
(6) Si loo diro emaylo xilli xilli ah
Cinwaanka emailka Isticmaalayaasha nidaamka loo dalbado, waxaa loo isticmaali doonaa oo keliya in loo diro macluumaadka iyo cusboonaysiinta amarka. Waxa kale oo loo isticmaali karaa inay ka jawaabto su'aalahooda, iyo / ama codsiyo kale ama su'aalo. Haddii User uu go'aansado in uu doorto liiska boostada, waxay heli doonaan emails kuwaas oo ay ku jiraan wararka shirkadaha, cusbooneysiinta, alaabada la xidhiidha ama macluumaadka adeegga, iwm. Haddii waqti kasta User uu jeclaan lahaa in aan ka faaiidaysto helitaanka emails mustaqbalka, waxaan ku jiraa faahfaahin abaabulaan tilmaamaha hoose ee email kasta ama User wuxuu nala soo xiriiri karaa boggayaga.
• Waxaan qaadaneynaa xog aruurinta habboon, keydinta, iyo ku shaqeynta iyo talaabooyinka amniga si looga ilaaliyo marin u helida aan la ogoleyn, bedelida, shaacinta ama baabi'inta macluumaadkaaga shaqsiyeed, magaca isticmaalaha, lambarka sirta ah, macluumaadka macaamil ganacsi iyo xogta ku kaydsan Boggeena.
• Ma iibinayno, ka ganacsanayno, ama ka kireyneyno isticmaaleyaasha macluumaadka aqoonsiga shaqsiyeed kuwa kale. Waxaan la wadaagi karnaa macluumaadka guud ee tirakoobka guud ee aan lala xiriirin wixii macluumaad aqoonsi shaqsiyeed ee la xiriira booqdayaasha iyo isticmaalayaasha la-hawlgalayaashayada ganacsiga, kuwa ku xiran kalsoonida iyo xayeysiiyeyaasha ujeedooyinka kor lagu soo sheegay. Waxaan u adeegsan karnaa bixiyeyaasha adeegga saddexaad si ay nooga caawiyaan inaan u shaqeyno ganacsigeenna iyo Bogga ama aan ku maamulno nashaadaadkeena, sida dirista joornaalada ama sahannada. Waxaan la wadaagi karnaa macluumaadkaaga dhinacyadan saddexaad ujeeddooyinkaas xaddidan haddii aad na siisay oggolaanshahaaga.
• Isticmaalayaashu waxay ka heli karaan xayeysiin ama waxyaabo kale oo ku saabsan Boggeena ku xiraya boggaga iyo adeegyada la-hawlgalayaashayada, alaab-qeybiyeyaasha, xayeysiistayaasha, kafaala qaadayaasha, shatiyeyaasha iyo dhinacyada kale ee saddexaad. Annagu ma xakamaynno waxa ku jira ama xiriiriyeyaasha ka muuqda bogaggan oo aan mas'uul ka ahayn dhaqamada ay adeegsadaan websaydhyada ku xidhan ama ka socda Degelkeenna. Intaa waxaa dheer, bogaggan ama adeegyadan, oo ay ku jiraan waxyaabaha ay ka kooban yihiin iyo iskuxirayaashooda, waxaa laga yaabaa inay si joogto ah isu beddelaan. Bogagan iyo adeegyadan waxaa laga yaabaa inay leeyihiin siyaasado u gaar ah iyo siyaasadaha adeegga macaamiisha. Daadinta iyo isdhexgalka websaydh kale, oo ay ku jiraan websaydhada leh xiriir ku leh Degelkeenna, waxay ku xiran tahay shuruudaha iyo siyaasadaha u gaarka ah boggaas.
• Baaragaraafkan Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah wuxuu sharxayaa sida xogta shakhsiga ah loogu adeegsado adeegyada lacag bixinta Apple (Apple ayaa bixisa). Intaas waxaa sii dheer, waa inaad akhridaa shuruudaha iyo shuruudaha Apple Pay. Hawlahaaga ganacsi ee loo maro WoopShop kuma xirna Apple Inc.
Markaad u isticmaasho Apple Pay lacag bixinta, waxaad weydiisan kartaa macluumaadka kaarka bangiga, xaddiga dalabka iyo cinwaanka boosta, laakiin WoopShop ma ururin doonto oo kuma keydin doonto wax macluumaad ah foomkaaga, kumana wadaagi doonto macluumaadkaaga qaaska ah xayeysiinta ama hay'adaha kale ee ka shaqeeya. qaab kasta.
• WoopShop waxay leedahay ikhtiyaar ay ku cusboonaysiin karto siyaasaddan asturnaanta waqti kasta. Waxaan ku dhiirrigelinaynaa Isticmaalayaasha inay si joogto ah u eegaan boggan wixii isbeddello ah si ay ula socdaan macluumaadka ku saabsan sida aan gacan uga geysano ilaalinta macluumaadka shakhsiyeed ee aan ururinno. Waxaad qiraysaa oo aad ogolaatay inay adiga masuuliyadaada tahay inaad dib u eegis ku sameyso siyaasadan asturnaanta xilliyada qaarkood oo aad ka warqabto wax ka beddelka.
• Adoo adeegsanaya Boggan, waxaad muujineysaa aqbalaadda siyaasaddan. Haddii aadan ku raacsaneyn siyaasaddan, fadlan ha isticmaalin Boggeena. Isticmaalkaada joogtada ah ee Bogga ka dib dhajinta isbeddelada nidaamkan waxaa loo qaddarin doonaa inaad aqbashay isbeddeladaas.
• Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah, dhaqamada boggan, ama la macaamilkaaga boggan, fadlan nagala soo xiriir support@woopshop.com ama info@woopshop.com
2. Shuruudaha & Shuruudaha
• Waxaad matashaa oo aad dammaanad qaadaysaa inaad tahay ugu yaraan 18 sano jir ama aad booqaneyso Goobta iyada oo ay kormeerayaan waalidiintaada ama ilaaliyahaaga. Adiga ayaa masuul ka noqon doona dhammaan marin u helidda iyo isticmaalka boggan qof kasta oo isticmaalaya erayga sirta ah iyo aqoonsiga asal ahaan laguu qoondeeyay haddii aad marin u hesho iyo isticmaalidda boggan dhab ahaan adiga ayaa oggolaaday.
• WoopShop.com waxay ka soo rari kartaa bakhaaro kala duwan. Amarada leh wax kabadan hal shay, waxaan u kala qaybin karnaa dalabkaaga dhowr xirmooyin iyadoo loo eegayo heerarka kaydka ee ikhtiyaarkeena ah. Waad ku mahadsantahay fahankaaga.
• Marka laga reebo haddii kale lagu bixiyo meelo kale boggan ama bogga, wax kasta oo aad soo gudbiso ama aad u dirto WoopShop.com, oo ay ku jiraan xadidnaan, fikrado, ogaansho, farsamooyin, su'aalo, faallooyin, faallooyin, iyo soo jeedin wadajir ah, soo gudbinta waa la daaweyn doonaa iyada oo aan qarsoodi ahayn oo aan khaas ahayn, iyo soo gudbinta ama dhajinta, waxaad ogolaatay inaad si aan macquul aheyn ruqsad u siiso gelitaanka iyo dhammaan xuquuqda IP ee la xidhiidha iyada oo laga reebay xuquuqda anshaxa sida xuquuqda qoraaga ee WoopShop.com iyada oo aan wax lacag ah lagaa qaadin oo WoopShop waxay lahaan doontaa lacag la'aan boqortooyo.
• Waa inaadan adeegsan cinwaan emayl been ah, iska dhig inaad tahay qof kale oo aan naftaada ahayn, ama haddii kale marin habaabin WoopShop.com ama dhinac saddexaad marka laga hadlayo asalka wixii soo gudbin ama Waxyaabo ah. WoopSHop.com waa laga yaabaa, laakiin waajib kuma aha inay ka saarto ama wax ka beddesho Soo-gudbin kasta oo ay ku jiraan faallooyinka ama dib-u-eegista sabab kasta ha noqotee.
• Dhammaan qoraalka, sawir gacmeedka, sawirrada ama sawirrada kale, astaamaha badhanka, agabyo maqal ah, astaamo, hal ku dhigyo, magacyo ganacsi ama erey software iyo waxyaabo kale oo ku jira websaydhka WoopShop.com si wada jir ah, Mawduuc, waxaa iska leh WoopShop.com ama waxyaabaha ku habboon. alaab-qeybiyeyaasha. Dhamaan xuquuqaha aan si cad loo siinin waxaa ilaaliyay WoopShop.com. Ku xadgudbayaasha waxaa lala tiigsan doonaa sharciga inta sharciga ka buuxo.
• Fadlan la soco in ay jiri karaan amarro gaar ah oo aynaan awoodin inaan aqbalno oo ay tahay inaan joojinno. Labada dhinacba waxay ku heshiiyeen, ka dib amarka dirista, gaadiidku waa mas'uuliyadda kaliya ee shirkadda saadka saddexaad. Inta lagu jiro marxaladan, lahaanshaha buuxa ee badeecada (alaabada) waxaa iska leh iibsadaha; dhammaan mas'uuliyadaha la xiriira iyo halista inta lagu jiro gaadiidka waxaa qaadaya iibsadaha.
• WoopShop.com waxaa ku jiri kara xiriiriyeyaal bogag kale oo internetka ah oo ay leeyihiin oo ay gacanta ku hayaan dhinacyo saddexaad. Waxaad qireysaa in WoopShop.com aysan mas'uul ka ahayn hawlgalka ama waxyaabaha ku jira ama marinaya bog kasta oo noocaas ah.
• WoopShop.com waxay xaq u leedahay inay bedesho shuruudahan iyo shuruudaha mustaqbalka ogeysiis la'aan.
Macaamiishu waxay noo qiimeeyaan 4.9 / 5 oo ku salaysan dib u eegista 125168.
dib u eegista 125168
4-10 Sano Xirmada Polka Dot Mesh Tulle Prom Gown ee Gabdhaha
Sawirka, gabadhaydu waa 5 sano jir, dharka ayaa yimid 130 cabbir. Dharka waa qurux quruxsan ...
Mooi en binnen toddobaadkii gekregen.
Si kastaba ha ahaatee, si kastaba ha ahaatee, waa mid aad u adag. Xaaladdan oo kale. Ельмі прывабны.
Dharka ayaa si buuxda u dhigma sharraxaadda. Dib -u -eegista waxaa lagu qoray mid ballaaran, oo runtii aad u ballaaran, laakiin ka sii ballaadhan sidii hore oo aan fuuli doonin, oo aad toli karto 15 daqiiqo. Goonnadu waa cagaar, darafka hoostiisa waxaa ku yaal dhowr lakab oo ah jaakado yaryar iyo goonno badh adag ah. Labbisku waa wanaagsan yahay. Dhererka 108 cm ayaa lagu amray 120 cm, malomerka.